Mgbe ị ga-aga Iceland: Mma n'oge ọ bụla | Njem akụkọ
Louis Martinez | | Atụmatụ, Islandia
Ọ bụrụ na ị na-eche mgbe ị ga-aga iceland, ihe mbụ i kwesịrị iburu n’obi bụ ihu igwe ahụ nke obodo ahụ. Ọ bụ ụdị climatology oké osimiri subpolar, na oyi na obere okpomọkụ na oyi oyi. Agbanyeghị, ndị nke ikpeazụ adịghị ike dị ka ị nwere ike iche n'ihi ọnọdụ Iceland. Mmetụta nke mmiri mmiri na-ekpo ọkụ belata oyi.
N'aka nke ọzọ, ihu igwe ya bụ maka ihe ịtụnanya eke nke mba Nordic na-enye gị glaciers dị egwu na osimiri glacial. Ọ bụrụ na ị na-agbakwunye ihe ndị a ugwu mgbawa, ị ga-aghọta na otu n'ime isi ihe nkiri Iceland bụ ọdịdị nke ya. Otu ọ dịla, oge ọ bụla dị mma ileta ala ndị ahụ. Ya mere, na mgbakwunye na ịkọwa mgbe ị ga-aga Iceland, anyị ga-atụ aro ihe ị ga-eme na mba ahụ n'oge oge ọ bụla n'afọ.
1 Njem na Iceland n'oge oyi
2 Oge okpomọkụ, ndụmọdụ kachasị mma maka mgbe ị ga-aga Iceland
2.1 Reykjavik, n'oge ọ bụla n'afọ
3 Njem na Iceland na mmiri ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ
Njem na Iceland n'oge oyi
Ọkụ Northern dị egwu
Ọ bụrụ na ịmaghị oyi, ị nwere ike ịga na mba Nordic n'oge oyi. Dị ka anyị na-ekwu, okpomọkụ adịghị ala ka ọ dị na ala ndị ọzọ nwere latitude na longitude yiri ya. Ọmụmaatụ, Norway o Suecia. Ihe kpatara ya bụ na ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ ya na ndịda na-asa ahụ site n'ọdụ ụgbọ mmiri ahụ e kwuru n'elu, nke sitere na Caribbean, mana e nwere nke ọzọ.
Iceland nọ n'otu n'ime ebe kacha ewu ewu na mbara ala. nwere a nnukwu ọrụ geothermal, nke nwere ọtụtụ ugwu mgbawa, isi iyi ọkụ na geysers. Ma, n'agbanyeghị ihe a nile, atụla anya na ị ga-ekpochapụ oyi n'oge oyi.
Reykjavik, isi obodo nke mba ahụ, nwere nkezi okpomọkụ n'oge oyi nke otu ma ọ bụ abụọ degrees Celsius karịa efu, n'agbanyeghị na ọ nwere ike iru adịghị mma iri. Ọzọkwa, snow dịpụrụ adịpụ n'ebe ọdịda anyanwụ n'ụzọ dị mfe. N'ọnọdụ ọ bụla, ihu igwe Iceland na-agbanwe nke ukwuu. N'ezie, enwere okwu n'etiti ndị bi na mba ahụ nke na-ekwu na ọ bụrụ na ihu igwe adịghị amasị gị, chere nkeji ise. Banye na.
N'aka nke ọzọ, oge oyi bụ oge kacha mma maka ịnụ ụtọ ụfọdụ n'ime ihe nkiri Iceland. Ọ bụ ihe gbasara ndị ama ama Aurora borealis. A na-ahụ ha n'agwaetiti ahụ niile, ọbụlagodi na Reykjavík. Mana enwere mpaghara nke okike ka mma maka ikiri ihe ịtụnanya a.
Ọkụ ugwu na-apụta n'ebe ugwu. Ya mere, mpaghara Iceland kachasị mma ịhụ ha na ịma mma ha niile. Kpọmkwem, e nwere ọtụtụ ebe ndị, na mgbakwunye na inye gị ohere ịhụ ha, dị egwu n'ezie. Ọ bụ ikpe nke ugwu kirkjufell, otu n'ime ebe kachasị ama ama maka njem nlegharị anya.
Naanị mita 463 dị elu, ọ nwere akụkụ conical na-achọsi ike na n'akụkụ ya enwere mmiri mmiri mara mma. Ọ bụrụ na ị gbakwunye ọkụ ndị dị n'ebe ugwu na ihe a niile, ị ga-enwe nchịkọta ọdịdị ala dị ka nrọ. Ọzọkwa gburugburu Hvitserkur Ha zuru oke iji tụgharịa uche n'ihe a. Ọ bụ mkpọpụta okwute pụrụ iche nke nwere ihe yiri dragọn na-aṅụ mmanya.
Na nkenke, enwere ọtụtụ ebe zuru oke ịhụ Northern Light. Mana anyị ga-ekwukwa banyere ya Ụlọ ọkụ Skardsviti, Ebe dịpụrụ adịpụ ebe ị ga-ahụ onwe gị n'ụzọ zuru oke na okike na ị ga-anụ ụtọ ọhụụ nke ihe ahụ dị ka n'ebe ole na ole ndị ọzọ.
N'aka nke ọzọ, ị nwekwara ike iji ohere ị gara Iceland n'oge oyi iji mara ebe ndịda nke àgwàetiti ahụ, nke ihu igwe dị nro karịa nke ugwu. Yabụ ị nwere ike ịga na Mmiri glacier, bụ nke kasị ukwuu na Europe nile; ihe magburu onwe ya Mmiri mmiri Gullfoss, ihe dị ka otu narị mita n'obosara na iri atọ miri emi; nke giiza, nnukwu geyser ma ọ bụ Ala dị larịị nke Thingvellir ma ọ bụ nzuko omeiwu, nke na-eleghara ọdọ mmiri dị egwu anya.
Ma ị nwekwara ike ịga na obodo ndị dị na ndịda dị ka Reykjavík n'onwe ya, nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. Kopavogur, ebe e nwere mmasị eke akụkọ ihe mere eme ngosi nka, ma ọ bụ Hafnarfjordur, ebe ị nwere ike ịga na chọọchị San José, ma n'elu ihe niile na-aga peculiar ememme viking nke a na-eme kwa afọ.
Oge okpomọkụ, ndụmọdụ kachasị mma maka mgbe ị ga-aga Iceland
Ala nke Thingvellir
N'agbanyeghị ihe niile anyị gwara gị gbasara oge ị ga-aga Iceland, oge kacha mma bụ oge okpomọkụ. Okpomọkụ na-atọ ụtọ karịa, yana nkezi ihe dị ka centigrade iri na abụọ, n'agbanyeghị na ha nwere ike iru iri abụọ na ise dabere na mpaghara obodo.
Ị nwekwara ike ịhụ ọkụ ndị dị n'ebe ugwu ma gaa na ebe ugwu na ugwu ndị siri ike ịhụ na ihu igwe na-adịghị mma. Dịka ọmụmaatụ, obere obodo ndị na-akụ azụ na-echekwa atụmatụ ọdịnala kachasị nke ime obodo Iceland.
Ọ bụ ikpe nke Husavik, weere otu n'ime ebe kacha mma n'ụwa na-ekiri whale, nke na-abịa n'ọnụ mmiri nke Skjálfandi nri. Ndị na-akwado Ornithology nwekwara ike ịnụ ụtọ obodo a nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ puku mmadụ abụọ bi, n'ihi na n'oge okpomọkụ, puffins na-aba ụba.
Obere obodo ọzọ kwesịrị ka ị bịa Siglufjordur, na Trollaskagi peninsula, na ya mere ochie ụlọ osisi na-ese na-egbuke egbuke na agba. Na mgbakwunye, o nwere ihe ngosi nka pụrụ iche nke Herring Era, nke ịkụ azụ ya bụ ihe eji ebi ndụ nke ndị bi na ya ruo ogologo oge gara aga.
Ihe ka mkpa bụ obodo nke Aureri nke, n'agbanyeghị na ọ nwere naanị puku mmadụ iri abụọ, a na-ewere ya dị ka isi obodo nke ugwu nke mba ahụ. Ọ bụ ugwu gbara ya gburugburu n'ebe ọdịda anyanwụ nke nnukwu ihe Eyjafjour Fjord na n'ikpere mmiri nke Osimiri Glera. Ọ bụ obodo Viking ochie nke a na-asọpụrụ taa na ihe oyiyi chukwu ogwu. Ị nwekwara ike ịga leta ya dị egwu ụka na ya Ogige Botanical. Ma, ebe ọ bụ na anyị na-ekwu banyere obodo Iceland, oge eruola ịkọwa ihe anyị ga-ahụ na Reykjavík, isi obodo obodo ahụ.
Reykjavik, n'oge ọ bụla n'afọ
Echiche nke Reykjavik
N'ihi na enwere ike ịga leta isi obodo Iceland n'oge ọ bụla. Ma, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ihe ncheta ya niile, ọ ka mma ịga n'oge okpomọkụ, mgbe okpomọkụ na-enyere gị aka itinyekwu oge n'okporo ámá. Ebe ihe na-erughị narị puku mmadụ abụọ bi, ọ nwere ọtụtụ ihe ọ ga-enye gị.
Ị nwere ike ịmalite njem gị nke ụlọ ndị ahụ nzuko omeiwu na nke ụlọ gọọmentị, ma malite na narị afọ nke XNUMX. Nnọọ nso ndị a, n'otu mpaghara Miöborg, bụ ndị Biblioteca na Theaterlọ ihe nkiri mba. I kwesịkwara ịga na National Museum nke Iceland na ụlọ Nordic, ọrụ nke onye na-ese ụkpụrụ ụlọ Alvar Aalto.
Ma, ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata ihe kasị omenala Reykjavík, na mgbakwunye na nke ochie obodo, ị ga-aga leta. Ebe nchekwa Arbaer Folk, ebe ị nwere ike ịhụ obere obodo dum ka e wughachiri n'ụdị mbụ kachasị dị ọcha. N'ikpeazụ, dị ka okpukpe ncheta nke obodo, anyị na-adụ ọdụ ka ị na-ahụ ochie katidral, site na narị afọ nke XNUMX, na Reykjavik Free Church. Ma, n'elu ihe niile, na-adọrọ mmasị Glọ Nzukọ ma ọ bụ katidral ọhụrụ, nnukwu ụlọ dị n'ihu nke ị ga-ahụ ihe oyiyi nke Erik RedOnye na-akwọ ụgbọ mmiri na onye njem Norwegian nke narị afọ nke XNUMX bụ onye chọpụtara Iceland. Agbanyeghị, obodo ahụ nwekwara ọmarịcha katidral Katọlik. nke Kraịst, bụ́ Eze.
Njem na Iceland na mmiri ma ọ bụ n'oge mgbụsị akwụkwọ
Ebe ọzọ dị egwu Icelandic, na nke a na mpaghara Vatnajokull n'oge oyi
Banyere mgbe ị ga-aga Iceland, ọbụlagodi oge abụọ a dị mma inye gị ndụmọdụ. N'ezie, ịbụ onye njem nleta kacha nta, ọnụ ahịa dị ọnụ ala na ma otu na nke ọzọ ị nwekwara ike ịhụ ọkụ ugwu na-achọsi ike. Dị ka a ga - asị na nke ahụ ezughị oke, ụbịa na-enye gị ihe ngosi okike nke agba na ugwu na ala dị larịị na ngwakọta nke osisi, mosses na lava foduru.
Okpomọkụ dị nnọọ ka n'oge abụọ a, ebe ọ bụ na ọ na-adịgasị iche n'etiti zero na iri degrees centigrade. Ọ bụ ezie na ụbọchị ha adabaghị kpọmkwem na nke anyị. Mgbụsị akwụkwọ na Iceland na-amalite na ngwụsị August ma kwụsị na mbido November. Naanị ihe ndọghachi azụ ya bụ na ọ bụ a oge ikuku, nke nwere ike ime ka njem nlegharị anya gị sie ike. I kwesịkwara iburu n'uche na e nwere ihe omume na-agwụ n'oge a. Dị ka ihe atụ, ya rafting n'ime osimiri ma ọ bụ njem nlegharị anya na ala kachasị elu.
N'akụkụ ya, mmiri Icelandic na-agbatị n'etiti Eprel na Mee. Ọ bụ ezie na ụmụ amaala nke mba ahụ na-eme ememe ụbọchị mbụ nke okpomọkụ n'April 18, ekwela ka ghọgbuo ya. Kama ọ bụ mmalite nke oge opupu ihe ubi. N'aka nke ọzọ, snow nwere ike ịda mgbe ụfọdụ, ma ọ dị ụkọ. Kama, ọ bụ mgbe ahụ nnụnụ ndị na-akwaga mba ọzọ na-amalite ịhụ. Dị ka ọchịchọ ịmata ihe, anyị ga-agwa gị na a na-ewere onye na-akụ ọla edo nke Europe na-ebute mmiri na Iceland. Otú ọ dị, ụdị ndị kasị ewu ewu na-abata na mba ahụ bụ ntụ ntụ, nke anyị gwaworo gị banyere ya.
N'ikpeazụ, anyị nwere olileanya na anyị azala ajụjụ gị mgbe aga iceland. Dị ka anyị kwuru, oge kacha mma bụ ndaeyo. Ma mmiri na ụbịa na-ewetara gị okpomọkụ dị ụtọ. Ọbụna oyi bụ oge dị mma iji gaa n'àgwàetiti Nordic. N'ihi na ọ kasị mma ịhụ ihe dị oké ọnụ ahịa Aurora borealis. Ọzọkwa, njem na ọnụnọ dị ọnụ ala karịa na, ọ bụrụ na-amasị gị na snowy Okirikiri, ọ bụ oge kacha mma ịghọta ịma mma nke. glaciers na fjords ya, ndị na-enweghị ihe ọ bụla anyaụfụ ndị si Norway. Ya mere, gaa na Iceland mgbe ọ bụla ịchọrọ, mana akwụsịla ime ya. Ùnu echeghi na ndi ayi nyere gi nwere ezi ihe mere i ji je?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Islandia » Kedu mgbe ị ga-aga Iceland?